ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 210
အဖြူလိုတဲ့ … အမည်း (သို့မဟုတ်) အမည်းကူတဲ့ … အဖြူ
ဂေါ်ရှယ် စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ သူမက … နူးညံ့တဲ့လေပြေရဲ့ ညင်သာစွာ လာရောက်ထိမှန်မှုကို နှစ်သက်ပေမဲ့ သူက … ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခတ်လာတဲ့ လေကိုဆန်ပြီး အန်တုရတာကို သဘောကျတယ် ….။ သူမက … အရိုးကွဲမတတ်အေးတဲ့ဆောင်းကိုကြောက်ရွံ့ပြီး … သူက … ပူပြင်းခြောက်သွေ့လှတဲ့နွေကို မနှစ်မြို့သူပါ …။ သူမက … အခန်းထဲအောင်းနေပြီး စာတွေမွေနှောက်ဖတ်နေရတာကို ခုံမင်ပြီး … သူက … မုဆိုးအတတ်ပညာနဲ့ အမဲလိုက်နေရတာကို ဝါဿနာထုံသူဖြစ်တယ် …။ သူမက … သက်တောင့်သက်သာနဲ့ သိမ်မွေ့မှုမှာ သာယာပြီး သူက … ခက်ထန်မှုနဲ့ စွန့်စားရတာကိုက သူ့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်နေခဲ့တယ် …။ သူမက .. ပြည်သူတွေရဲ့...
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ နေရာ နေရာ နေရာ မရှိ …။ ရေရာ ရေရာ ရေရာ မရှိ …။ သေချာ သေချာ သေချာ ပါ၏ …။ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ ……… ……… ……… ……… ……… မရေရာ မသေချာ နေရာ မရှိ … ။ ။ No tags for this post.
ဇော်ထက် (ပျဉ်းမနား) စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အကြောင်းအကျိုးအမှန် မြန်မာလမ်းလေတဲ့ ဒေါင်းမျိုးအသံ ကမ္ဘာလွှမ်းနေခဲ့ပြီ …။ ပန်းတွေနဲ့ဝေ အမေတစ်ယောက်ရယ်က အလွမ်းတွေနဲ့ တပြည်ရောက်တို့ကို အပန်းတွေ ပြေကာပျောက်စေဖို့ စခန်းတွေ အမေလျောက်တယ်ကွယ့် ပန်းပိတောက်ရယ် လွမ်းလောက်ပါရဲ့ နန်းတစ်ထောက်ရယ်က မဝေးတော့ပြီ …။ ။ ဆန်းဒါးလန်း၊ ယူကေ။ No tags for this post.
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ စစ်ပွဲတွေကို .. ခင်ဗျားခံစားချင်တဲ့ အသားတဖတ်နဲ့ လဲလို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျား ရပ်ချင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရပ်ပစ်လို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျားရဲ့ ရွှေပြည်အေးတရားနဲ့ တားဆီးလို့ ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ခင်ဗျားရဲ့ ရန်သူ့ သွားကြားထိုးသံနဲ့ ငြိမ်းအေးလို့ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို အဲဒီလို ကလေးမလေးတွေရဲ့ အပျိုရည်ပျက်မှုတွေနဲ့ လဲလှယ်လို့ရပါသလား … စစ်ပွဲတွေကို ….. ။ ။ (၀င်းမော်ဦး ကျဆုံးတဲ့နေ့မှာ ရေးတယ်) No tags for this post.
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ လေ လေအားတွေ လျော့ဖို့တော့လိုပြီ …။ လူ လူဦးရေ ထိမ်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် … မရ သန်း ခြောက် ထောင် လက်နက် လက်နက်တွေ စွန့်လွတ်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် … မရ သန်း ခြောက် သောင်း စစ် စစ်ပွဲတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် … မရ သန်း ခြောက် သိန်း လူ လက်နက် စစ် လေအားတွေ လုံးထွေးရစ်ပတ် ဤကမ္ဘာမြေ နှစ် သန်း ခြောက် သန်း ရှည်ပါစေသား ….။ ။ မှတ်ချက် – လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခန့်က...
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ငွေတမတ်နဲ့ ချေဂွေဗါးရား ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ မဟာဗန္ဓုလ ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက်ဖြစ်ခဲ့ … ငွေတမတ်နဲ့ ဧကရာဇ်မင်းတပါးလည်း ဖြစ်ခဲ့ ငွေတမတ်နဲ့ …။ အဲဒီ ငွေတမတ်နဲ့ ငါးကြင်းခေါင်းကိုင်ရတဲ့ အိပ်မက် ခလေးဆိုတော့ မက် မတတ်ခဲ့ဘူး …။ ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲ တမတ်တန် ကပ်ခွာကလေးများ လက်ဖ၀ါးပေါ်က အရှိုးရာများနဲ့ လဲခဲ့တယ် …။ ။ No tags for this post.
ကျော်ဟုန်း စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ သူက ကောင်းကင်နံရံကို ဆုပ်ဖြဲလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ စွမ်းအင်ကို ဝေမျှ စားသုံး ကြယ်တွေကို မီးထွန်းလိုက်ပြန်၊ (သူ…ဆိုတာက) ညကောင်းကင်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြတ်သန်းဖူးတဲ့ အတွေ့ အကြုံ သူ့ဆီမှာ ရှိတယ်၊ ဒို့ဆီမှာတော့ ဝံပုလွေတွေ အူသံကြားရတဲ့ညတိုင်း တာဝန်ကြေ “လ” သာစမြဲပေါ့၊ “တောက ခေါင်သကိုး” ညဉ့်နက်တွေမှာ ထိန်လင်းဖို့ “နေ”ဆီက သူဖဲ့ယူထားတဲ့ အလင်းစုဟာ သူ့ပကတိ မာယာမဟုတ်၊ သူ့ရဲ့ အမြဲတမ်း အကျင့်တခုက အာရုဏ်ဦးဆီ အလည်အပတ် ပို့ဆောင်ကြဉ်း နေ့သစ်များကို ချစ်တတ်အောင် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ပန်းစုံ ပိုပွင့်အောင် သူ့လက်ရေးနဲ့ “ကကြီး၊ ခကွေး” သင်ပေးဖူးတယ် “အ”အထိ၊ ကျောက်ဆောင်တွေကို ဖြိုဖျက်ဖို့...
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ မြင်း … မြင်းဟာ မွေးလာတုန်းက ကုန်းနှီးပါမလာဘူး။ မြင်း … မြင်းဟာ မွေးဖွားလာစဉ်က ပါးချပ်ပါမလာဘူး။ မြင်း မြင်းဟာ … သံခွာပါမလာဘူး။ မြင်း မြင်းရဲ့ကျောမှာ ကြိမ်လုံးကြာပွတ် ရိုက်ချက်ဒဏ်ရာ ပါမလာခဲ့ဘူး။ မြင်း … မြင်းဟာ သူ့အတွက် စားကျက်မြက်ခင်းစိမ်းလိုတယ် …၊ သောက်စရာ ရေအနည်းငယ် လိုမယ် …၊ ကြိုတင် သတ်မှတ်မထားတဲ့ ဘ၀ပြေးလမ်းတွေ လိုမယ် …။ မြင်း … မြင်းဟာ … လရောင်အောက်မှာ ကဆုန်ပေါက် ပြေးလွှားမယ် … သူ့လည်ဆံမွှေးမှာ သူ့မာနရဲ့ ပကတိအလှ တည်ရှိမယ် သူ့ပါးစပ်က ဟီသံနဲ့ နှာမှုတ်သံမှာ ရန်သူရဲ့...
ဇော်ထက် (ပျဉ်းမနား) စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ကမ္ဘာကြီးက ဘာများမှားနေလည်းမသိဘူး အမေရေ … လူတွေများ နေနေကြတာက မိဘမဲ့တွေလိုပါပဲလား……။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေကို စွဲလမ်းနေပေါ့ … စိတ်သောကဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကိုသာ တမ်းတနေကြပေါ့ … တိုင်းတစ်ပါးမြေမှာတော့ အင်းလေ ကျွန်တော်တို့ အဖျက်သမားတွေကို တားဆီးဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်ပေါ့ … ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အဖျက်သမားတွေဆိုတာက ရှိနှင့်ကြပြီးသား … ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကြီး ဘလတ်ဒ်စ်နဲ့ ခရစ်ပ်စ်နှင့် ကေသုံးလုံးအဖွဲ့များ …။ ဒါပေမယ့်လို့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် တစ်ခုတည်းကိုသာ မေတ္တာထားနိုင်ရင်ပေါ့ … အဲဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ခွဲခြားကာ ဘက်လိုက်ဖို့ နေရာလပ်တွေကို ချန်ထားတာပဲ …. ခွဲခြားဘက်လိုက်မှုတွေဟာ အမုန်းတရားတွေကိုသာပဲ မွေးဖွားလာစေတယ်...
ခင်အောင်အေး စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ အားလုံးလောက်နီးပါးကိုတင်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ယာဉ်ဟာ ထွက်ခွာဖို့အသင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီ …။ အပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မသေမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုတွေ … နေကွယ်ဝင်နေကျ ဟောဟိုတောင်စွယ်မှာ သားရဲတွေတင်းကျမ်းပြည့်လို့ (သွားရည်တမြားမြားနဲ့ ..) ရုပ်ခန္ဓာဟာ စိတ်အလိုနဲ့ နသားပါးယားကြည်မွေ့လျှက် အဆီဝင်းဝင်းနဲ့ သဲတရှပ်ရှပ်တွေချည့်သာ နိုင်လိုခံခက် … ကမ်းပါးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ မျက်နှာသေနဲ့ဝိညာဉ်လောကသားများ ပြီးတော့ စီးဝင်စရာပင်လယ်ပျောက်နေတဲ့ တဟုန်ထိုးရေအလျဉ်။ ။ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ချေလ်တန်ဂရို့ဖ်၊ လန်ဒန်။ ၀၃း၄၉ နာရီ။ No tags for this post.
Page 210 of 226«1...208209210211212...226»
မောင်သော်တာ - ပေတစ်ရာပေါ်မှာ စီးတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဘူး
လင်းသက်ငြိမ် - သေဆုံးသူရဲ့ဓာတ်ပုံ